Ihe ị ga -ahụ na Bologna | Akụkọ njem
Istali bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya na Europe. Akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị, ọdịdị ala… Onye nwere ike ịwagharị ọtụtụ ụbọchị site na ọdịdị ala ya na-enweghị ịkwụsị ịtụnanya, otu ụbọchị, ọ ga-abata Bologna, n'ebe ugwu.
Na nso Apennines ọ bụ otu n'ime obodo ochie echekwara nke ọma na mba ahụ ma ọ bụrụ na ihe ochie na-amasị gị, ọ bụ ezigbo akụ. Ka anyị lee ihe dị taa ihe ị ga-ahụ na Bologna.
Bologna, Bologna, bụ n'ebe ugwu oftali ma bụrụ isi obodo Emilia - Romagna. Ndi Etruscan onye guzobere ya, ka o mechara bụrụ ọchịchị roman site n’oge ndị a ọ na - enweta aha ya.
Mgbe emesiri ndi Popo ga-achi ya na ndi agha Napoleon ga-agabiga n'okporo uzo ya na ngwụcha narị afọ XNUMX. Ọ bụ ihe dị mkpa ọdịbendị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na azụmahịa. Nke a bụ mahadum, ama ama n'ihi na ọ tọrọ ntọala na 1088, ma eleghị anya mahadum kacha ochie na mba ọdịda anyanwụ, ya mere eji mara ya dika Bologna ndị Mụtara.
Ọtụtụ ndị bi na Bologna. Obodo zuru ike na ndagwurugwu n’agbata osimiri Savena na Reno ọ bụ ya mere o ji nwee ọwa ụfọdụ. Ikekwe ọ naghị adọta ọtụtụ ndị njem nleta dị ka Venice, ma ọ bụ dị ka isi obodo Italiantali n'onwe ya, mana ị ga-eleta ya. Ma ọ bụ naanị otu awa na ọkara site na Florence, abụọ si Rome ma ọ bụ 40 nkeji site na Florence, mgbe ọ bụla ụgbọ oloko.
Kedu ihe anyị ga-eleta? Ọ dị mma, ihe ị ga-eburu n’uche bụ na Italytali bụkwa maka iri nri na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ ,ụ, ọ bụghị naanị ịgagharị na ileta ebe a na-edebe ihe mgbe ochie. Yabụ, otu ụtụtụ na Bologna anyị ga-eri nri ụtụtụ na nnukwu akụkụ, Pizza Maggiore, iji hụ ọbịbịa na ịpụ nke obodo na ndị ya. Site mgbe ahụ gaa n'ihu, m na-adụ ọdụ na-agagharị n'okporo ámá dị ka oge ochie dị ukwuu na ezi kọmpat.
La Piazza Maggiore dị na obi Bologna na nwere ụlọ ndị dị mkpa dịka Palazzo del Podesta, Basilica nke San Petronio, Palazzo Comunulae ma ọ bụ Palazzo d'Accursio. N'ebe ugwu nke square e nwere ihe ọzọ, na Piazza del Nettuno, nke nwere mkpụrụedemede mara mma nke emere kpam kpam na Neptune.
Na Piazza Maggiore ị ga-agarịrị na Basilica nke San Petronio, raara nye onye nlekọta obodo ahụ. Ọ mara ezigbo mma n'èzí, ọ bụ ezie na ezughi oke. Ọ bụbu ụka nke iri kacha ibu na ụwa, site na mpịakọta, ma nwee ọdịdị dị mma. Nwee a Othdị Gothic Emeburu ya na 1338, ọ bụ ezie na ọ gwụchara, ọ bụghị kpamkpam, na 1479.
Tlọ abụọ ahụ, na Piazza di Porta Ravegnana, bụ ebe ọzọ na-elekwasị anya. Iji Inlọ Asinelli, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 mita dị elu, enwere ike ịrịgo maka ihe na-erughị euro 3 ma site n'elu echiche dị oke mma. Mụ akwụkwọ na-ezere ịrịgo ruo ngụcha maka na akụkọ a na-ekwu na nwata akwụkwọ ahụ rịgoro ya agaghị anabata ya ... ...lọ nke ọzọ bụ ndị Garisenda, Mita 48 na mkpụrụ ego na nke ahụ nwere mmasị.
Na Piazza Santo Stefano enwere ụlọ oriri na ọcyụ fanụ mara mma, ọ dị mma izu ike n'ụkwụ gị. lee ihe a Basilica Santuario Santo Stefano, nke nwere ụka asaa sitere n'oge dị iche iche wuru na mkpọmkpọ ebe nke ụlọ nsọ ochie nke raara nye Isis. N'aka nke ọzọ, ụlọ nke kacha adọrọ mmasị n'obodo bụ - Chidinma Onyekwere, n'ime Mahadum Bologna, nke na-ezobe mma Atlọ ihe nkiri nke Anatomical.
E ji osisi rụọ ime ụlọ a, ọ pere mpe ma nwee ọtụtụ akpụrụ akpụ nke ndị dọkịta ama ama. N'ime etiti, oche niile gbara gburugburu, bụ tebụl anatomical ebe ụmụ akwụkwọ mụtara banyere ahụ mmadụ. Lọ ahụ bụ Narị afọ nke XNUMX ọ dịkwa na Piazza Galvani.
Mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie enwere ọtụtụ ịhọrọ site na. Anyị nwere ike ịkpọ aha ya Pinacoteca Nacional, Museum nke Modern Art, Civic Archaeological Museum, Medieval Museum na Renaissance Museum., n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Museumlọ ihe ochie nke Bologna na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ dị na Piazza Maggiore na o nwere ngalaba itoolu na-agafe n'oge gara aga, oge Etruscan, Celtic, Greek, Roman yana ọ nwekwara ngalaba ndị Egypt na ọnụọgụ.
Enwekwara National Gallery nke Bologna, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ya niile metụtara mpaghara ahụ. Enwere ọrụ site na XNUMXth na XNUMXème narị afọ. Ọ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ akwụkwọ mahadum ochie ma nwee ngalaba abụọ: Clementine Academy na Gallery of the Academy of Fine Arts. Enwere ọrụ ndị Raphael na Titian na-arụ. Na mgbakwunye na saịtị ndị a, anyị ga-echeta na enwere ọtụtụ obí eze na obodo nta.
Ebe mara mma na Piazzola na ahịa ya mere eme. A na-ewu ya na Piazza dell Agosto, n'ebe ugwu nke obodo ahụ, ma nwee 400 oche ebe ị nwere ike ịzụta ihe niile site na akpụkpọ ụkwụ na ngwa ejiji na okooko osisi na ọla.
To nwere ije? Mgbe ahụ, m na-agwa gị rịgoro n'elu Monte della Guardia. Ọ bụ ugwu ọhịa nwere ihe dị ka narị mita atọ n'ịdị elu, ndịda ọdịda anyanwụ nke Bologna na nso Osimiri Reno. Ije ahụ na-enye obi ụtọ ịgbaso dịka ọ gụnyere ịga ije n'ụzọ mbata dum wee malite ịrị ugwu ahụ. Site n'elu, echiche ndị dị ebube na enwere ụlọ nsọ, nke Madonna de San Luca, n'ebe ahụ, na-eche gị.
Obe Obe Ndị a bụ arches nke dị n'okporo ámá nke Bologna, ụzọ ụkwụ, ụzọ ụkwụ kpuchie, nke na-echebe ndị mmadụ pụọ na mmiri ozuzo na anwụ na ndị nke ndị ahịa ka na-ewukwa ụlọ ahịa ha. E nwere mfe a ngụkọta nke 3.8 kilomita nke ihe owuwu ụzọ mbata, na ndịda ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ, na agbanyeghị na enwere ọtụtụ ebe niile, nke a bụ ama ama, nke na-akpọga gị n'ugwu ahụ m kpọrọ aha na mbụ na echiche panoramic. Ihe edere n’ogugu na nke ikpeazu bu 666.
N'ikpeazụ, obodo nwere kaadị njem nleta, ihe Bologna Nnabata Kaadị, na nsụgharị abụọ: Mfe na Plus. Nke mbụ na-efu euro 53 na nke abụọ, euro 78. Na nkenke, ọ bara uru ileta Bologna ọbụlagodi ma ị nụghị aha ya n'etiti ndị na-aga fortali maka njem.
Ọ bụ nke ochie, ọ mara mma, ọ mara mma, ọ nwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie, ahịa na ụlọ oriri na ọ hasụ ,ụ, ọ nwere echiche panoramic, ọ nwere ụka, ọ nwere ebe ano na obere akụkụ… ma ọ bụghị ọtụtụ mmadụ dịka ụfọdụ ndị agbata obi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Bologna » Ihe ị ga-ahụ na Bologna